ELSKALIMBA 3K စာရင်းသွင်းသူများ GIVEAWAY - Kalimba ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း - Kalimba ဖိုရမ်
ELSKALIMBA 3K စာရင်းပေးသွင်းသူများ GIVEAWAY
စာမျက်နှာ 1 /512345 နောက်တစ်ခု
အားလုံးမင်္ဂလာပါ! Kalimba ဖိုရမ်မှ Kalimba ကစားသမားအားလုံး Kalimba အကြောင်းအားလုံးကိုမျှဝေနိူင်သည့်ဒီ Kalimba ဖိုရမ်မှကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီလက်ဆောင်ပေးမယ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်🙂 မင်းကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါ။ ဟေး၊ ဒီ Kalimba ကိုမင်းဘာလို့အနိုင်ရချင်တာလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြပါရစေ။
ခေါင်းစဉ် starter Posted: 12/04/2021 1:55 pm တွင်
simreen71, ရှီဖာ, ၀၂၀၃၀၈_y နှင့်လူ 39 ကြိုက်တယ်
စွန့်ကြဲသည် elskalimba အခမဲ့ kalimba kalimbara အားတင်းထားပါ
မင်္ဂလာပါ ... ဂုဏ်ယူပါတယ် ...
Posted: 12/04/2021 3:25 pm တွင်
Nataliya နှင့် Meryaxian ကြိုက်ခဲ့
ya inpiring ထားပါ။
Kalimba ကိုလည်းသင်ယူခဲ့တယ်၊ မင်းရဲ့ဗီဒီယိုကို YouTube မှာမတော်တဆမတွေ့မိဘူး။
Posted: 12/04/2021 3:27 pm တွင်
Posted: 12/04/2021 3:34 pm တွင်
ငါလက်ဆောင်ပေးမယ်ကိုအနိုင်ရချင်တယ်။ ci els လိုပြိုင်ဆိုင်မှုကိုကစားချင်တာ because
Posted: 12/04/2021 3:49 pm တွင်
အောင်မြင်မှုအတွက်ချီးကျူးဂုဏ်ယူပါတယ်၊ အနာဂတ်မှာမင်းဟာပိုပြီးအောင်မြင်မှုရပြီးဆက်အလုပ်လုပ်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါအနိုင်ရချင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကငါ Kalimba ကိုတကယ်လိုချင်တဲ့အတွက်၊ ငါ့ဂီတစွမ်းရည်ဟာပျမ်းမျှအားဖြင့်နည်းနေသေးတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ Kalimba တူရိယာကိုတကယ်လေ့လာချင်တယ်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှစပြီးကျွန်ုပ်ဝယ်ချင်ပေမယ့်မပြီးသေးဘူး မျှော်လင့်ဒီငါ့အကံဇာတာဖြစ်လိမ့်မည် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်
Posted: 12/04/2021 3:51 pm တွင်
မင်္ဂလာပါ Ate Els🥰🥳❤️
ငါ Kalimba ကစားခြင်းကိုနှစ်သက်သောကြောင့်ကျော်ကြားသောအမှတ်တံဆိပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပျော်ရွှင်လို။ ဖြစ်သည်။
Posted: 12/04/2021 3:52 pm တွင်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ Kalimba ဖိုရမ်မှ Kalimba ကစားသမားအားလုံး Kalimba နှင့် ပတ်သတ်၍ အားလုံးဝေမျှနိုင်သည်။ ကြိုဆိုပါ၏။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ ဟေး၊ ဒီ Kalimba ကိုမင်းဘာလို့အနိုင်ရချင်တာလဲ?
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ Kalimba Murai ချင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Kalimba ကကောင်းတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားမှာလုပ်တယ်
Posted: 12/04/2021 3:53 pm တွင်
မင်္ဂလာပါ !! 3k အပေါ်ဂုဏ်ယူပါတယ် !!! 🎉🎉🎉ငါဟားဟားဟားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး h h h h h h h🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Posted: 12/04/2021 5:18 pm တွင်
ငါ acoustic ဂစ်တာနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်စပ်စုသောကြောင့် Kalimba စိတ်ဝင်စားခဲ့သည် ..
ဤပို့စ်ကို လွန်ခဲ့သော 1 နှစ်က ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ Arifin
Posted: 12/04/2021 10:38 pm တွင်
မင်္ဂလာပါ၊ selamat yaa !! 💖
Posted: 13/04/2021 1:52 pm တွင်
ငါkalimba😣မရှိတဲ့အတွက်ဒီ Kalimba ကိုငါအနိုင်ရချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ Kalimba ကိုတကယ်လေ့လာချင်တယ်။ Kalimba ကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးထူးခြားတဲ့ဂီတတူရိယာလို့ထင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါလိုမင်းလိုသင်ခန်းစာယူပြီးသင်ယူချင်တယ်
Posted: 13/04/2021 2:23 pm တွင်
မင်္ဂလာပါ❤ Subscriber 3000 ကျော်အားဂုဏ်ပြုပါတယ်
Posted: 13/04/2021 3:33 pm တွင်
3K subscribes များအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်
အဘယ်ကြောင့်ဤ Kalimba ကိုအနိုင်ရလိုသနည်းကျွန်ုပ်သည်ဤဂီတတူရိယာကိုအလွန်စိတ် ၀ င်စားသောကြောင့်၊ Kalimba ကိုစတင်လေ့လာလိုပါသည်။ ဤအခွင့်အလမ်းအတွက်သင်ကံကောင်းပါစေ။ ဂီတ။ ဒီဟာအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်
Posted: 13/04/2021 3:58 pm တွင်
Semangat ထပ် ya Els
Posted: 13/04/2021 4:01 pm တွင်
ခေါင်းစဉ်များ Tags: လက်ဆောင် (၄), elskalimba (၁), အခမဲ့ kalimba (1), Kalimbara (4), murai kalimba (၁),